Bido Oge Mkpụrụ Obi na Sugarlove1 App
Maka ndị kpọrọ asị Iwu nke "Sugarating Traditional", mana ha chọrọ agụụ mkpụrụ obi Sugarlove®.
Ugbu a anyị ahapụla gị “Mgbaàmà na-adịghị mma” na:
Ọnyà dina gị n’oge gara aga
Na-ahapụ gị inwe mgbagwoju anya, drained, ejighị n'aka na adịghị ike
Na - egbochi gị ịkwalite mmekọrịta nwere ike ịdị mma ugbu a
Kwụsị stall na-azọrọ gị soulmate
You na-alụ ọgụ maka Mkpụrụ Obi Njikọ nwere ike ịdị n'etiti gị na ụbọchị gị? Ọbụna ma ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ, ihe kachasị mma maka mkpụrụ obi ọ bụla metụtara, nwere ike ibute njedebe nke Mkpụrụ Obi.
Sugarlove® gbasara ịhụ mkpụrụ obi nke ọzọ n'anya ozugbo na iji obi ghe oghe. Ọ bụ Mmekọrịta Ime Mmụọ. Nke a nwere ike isi ike, ebe ọ nwere ike iyi ka ọ dị mfe ịnagide ọrụ nke ibe gị, na-agbasa ebe ị nọ nke ọma ma rapara n'ihi na ụjọ na-atụ gị ịmegharị uche gị.
Site n'inwe ezi uche na echiche ọhụrụ, ị dịla njikere ugbu a ibido mkpakọrịta nwoke na nwanyị site ugbu a gawa.